Iindaba -Ilaphu le-RPET (Ilaphu elenziwe ngokutsha kwePET) likwabizwa ngokuba yicoke yebhotile yecoke eluhlaza.
Ilaphu le-RPET (Ilaphu lePET elenziwe ngokutsha) likwabizwa ngokuba yicoke yebhotile yecoke eluhlaza.
Ilaphu le-RPET (Ilaphu elenziwe ngokutsha lePET) likwabizwa ngokuba yicoke yebhotile yecoke eluhlaza. Luhlobo olutsha lwelaphu eliluhlaza eliluhlaza elenziwe ngokurisayikilisha intsimbi ye-PET. Ukuvela kwayo kwekhabhoni esezantsi kudale umxholo omtsha kwicandelo lokuphinda kuhlaziywe, ngokokuqinisekiswa kokuvavanywa, kungonga phantse i-80% yamandla xa kuthelekiswa nefayibha eqhelekileyo ye-polyester eluhlaza.
Inkqubo yemveliso yahlulwe yangamanyathelo amathandathu: Phinda usebenzise ibhotile eyiXabiso → uhlole kwaye uhlukanise iibhotile eziXhasiweyo → slice ibhotile oyigcinileyo → ukhuphe isilika, upholile kwaye uqokelele isilika → phinda usebenzise umsonto we-PET → wenze ilaphu
Ngokwentlobo yomsonto: ilaphu le-filament, ilaphu le-elastic, ilaphu eliqhelekileyo
Ngokwesitayile sokuluka: i-RPET Oxford yelaphu, amalaphu e-RPET ojikelezayo (ilogo), ilaphu le-RPET filament (ilogo), ilaphu lepeyinti yesikhumba se-RPET, ilaphu le-RPET faux suede, amalaphu e-RPET chiffon, amalaphu e-RPET umbala we-butyl, ilaphu le-RPET LiXin (engekho -woven), RPET ilaphu conductive (esd), RPET ngelaphu ngelaphu, RPET terylene ilaphu, RPET ilaphu, igridi RPET jacquard amalaphu, RPET ukunitha ilaphu (ilaphu), RPET umnatha ilaphu (isandwich enemingxuma yengubo, amaso kunye nelaphu lemingxunya, intaka -ilaphu), i-RPET flannelette (uboya bekorale, velvet kaFarley, uboya begusha obumhlophe, velvet enamacala amabini, i-PV velvet, ivelvet ethambileyo, velvet yomqhaphu ethambileyo).
Impahla: ingxowa yekhompyuter, ibhegi yomkhenkce, ibhegi, ibhegi, itroli, ityala lokuhamba, ibhegi yezithambiso, ibhegi yepen, ibhegi yekhamera, ibhegi yokuthenga, ibhegi yesipho, ingxowa yesipho, ipokotho yeebhegi, istraler somntwana, ibhokisi yokugcina, ibhokisi yokugcina, ibhegi yamayeza, imithwalo kunye nezinye izinto;
Impahla eyolukiweyo yasekhaya: ikhava yebhedi eneengubo ezine, ingubo, umva, ukuphosa umqamelo, into yokudlala, ilaphu lokuhombisa, isigqubuthelo sesofa, ifaskoti, isambrela, idyasi yemvula, umthunzi welanga, ikhethini, ilaphu lokusula, njl.
Impahla: ezantsi (ezibandayo) iimpahla, isinqanda-moya, ibhatyi, ivesti, iimpahla zemidlalo, iblukhwe yaselwandle, ibhegi yokulala yosana, isuti, isikhafu, ukunxiba umsebenzi, ukunxiba umsebenzi, ifashoni, ilokhwe yeopera, ipijama, njl .;
Abanye: iintente, iibhegi zokulala, iminqwazi, izihlangu, izinto zangaphakathi emotweni, njl.
Itoni enye yentsontelo ye RPET = 67,000 iibhotile zeplastikhi = 4.2 iitoni zecarbon dioksidi zigciniwe = 0.0364 iitoni zeoyile ezigciniweyo = 6.2 iitoni zamanzi ezigciniweyo Kodwa okwangoku, yinxalenye encinci kuphela esetyenziswayo, kwaye enye iyalahlwa kude ngentando, isiphumo kwinkcitho yemithombo kunye nongcoliseko lokusingqongileyo. Ke ngoko, itekhnoloji yokurisayikilisha inethemba elibanzi.
Ixesha Post: Sep-10-2020